Different Between ‪#‎go‬ & ‪#‎visit‬ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:16 PM | No မှတ်ချက် | အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန် - ရွှေအိမ်စည် 1. go နဲ့ visit အဓိပ္ပါယ်တူ ၊ သွားတွေ့တယ်လို့ စိတ်မှာယူ၊ 2. to ဆိုတာကို မထည့်ရ ၊ visit နောက် မှာဗျ ၊ 3. Visit နောက်က to ထည့်တာ ၊ Noun ရဲ့သဘော သုံးရင်သာ၊ 4. ဟောဒီ မှာ ကြည့်ပါလား ၊ A visit to the pagoda.
1. go နဲ့ visit ၏ အဓိပ္ပါယ် မှာ သွားတွေ့တယ် ဖြစ်သည်၊ visit ၏ နောက် တွင် to ကိုမထည့်ရပါ ၊go နောက်တွင် to ထည့်၍ရသည်။
3. ဘယ်အချိန် မှာ visit နောက်မှာ to ထည့်သနည်း Visit ကို Noun သဘော သုံးသောအခါတွင် မှ visit နောက်တွင် to ထည့်ရပါသည်။
Go = သွားသည် ( တနေရာမှတနေရာသို့သွားသည် ) ခရီးသွားသည်၊ ---------------- 1.He goes to work by bus. 2.She went into her room and shut the door. 3.I have to go to Naypyitaw on business tomorrow. 4.We're going to Thailand for our vacation this year. 6.My uncle has gone to China. 7.I think you should go to the doctor's . 8.I went to the cinema with my friend last night . 9.I go to the hospital for medical treatment. 10.We go there . 11.We went to Ngwe Saung Beach last summer.
Visit ( Verb)= အလည်အပတ် သွားသည် ၊ -------------- We visited Poppa . We visited Ngwe Saung Beach. My aunt visits our house onceaweek. The children visited the zoo last Sunday. The group of tourists visit Bagan. Visit နောက်က to ထည့်တာ ၊ Noun ရဲ့သဘော သုံးရင်သာ၊ ဟောဒီ မှာ ကြည့်ပါလား ၊ A visit to the pagoda. We hadanice visit.